2009 Review by Myself | ကိုသင်ကာ . . . . Ko Thinker
← The Most Visted Pages in MOE
Kayah Sub-Groups →
ကိုယျက စတေနာနှငျ့ လူတကာခဉျြဖတျကွီးကို ဘုမသိဘမသိ ကူမိသဖွငျ့ စာမူသူခိုး ယိုးစှပျခံရပါသေးသညျ။ ကိုယျက ပိုကျဆံမမှု အပြျော လြှောကျရေးနတော သူမသိ။ သူ့ဖာသာ တမိုးလုံးဖြောကျဆိတျ မဂ်ဂဇငျးမှာ ကိုယျ့စာမူတှေ အလကားပေးခဲ့သညျ့ မကျြနှာပငျ မထောကျ၊ တခွားနရောမှာ သူ့ဖာသာ စကားကြှံလာသညျကို အကွောကျအကနျ သူ့အရှကျမကှဲအောငျ ကိုယျ့အရှကျကို အကွံအဖနျခှဲဖို့ လုပျ၏။ သူဘာလဲ လူတကာသိ၍သာ သောကျရှကျလှလှ မကှဲခဲ့ပါ။
မိနျးမနှဈယောကျနှငျ့ ပတျသကျ၍မှု ကောငျးကောငျးကွီးပညာ ရသှားပါပွီ။ ဘလော့ဂျလောကမှာနလေကျြ ငါ ဘလော့ဂျပါး မဝသေးဟု သိလိုကျရ၏။ သမေညျ့အလှညျ့ခညျြး စဈထဲလိုကျမိ၏။ ပါးစပျပါတိုငျး မပွောတတျသညျဖွဈ၍ သူရို့ မိနျးမြားနှငျ့ ယှဉျမပွောနိုငျ။ အခြိနျတနျ နှားပိနျကနျမညျဟုသာ ဥပက်ေခာ အညီအမြှ ရှုရတော့သညျ။
၂၀၁၀ သညျ အဖုအထဈ အထအေ့ငေါ့ကလေးမြားနှငျ့ ကွိုလငျ့သညျ။ သိပျတော့ ထီထငျလှသညျ မဟုတျပါ။
လြှပျစာအုပျတှေ မြားမြားစုမိသညျ။ စာဖတျဖွဈသညျ။
မိုကျမွဲမိုကျသေးသညျ။ မလိမ်မာ။ ဘယျသော အခါလိမ်မာမလဲ ကိုယျ့ဖာသာ မသိ။ သူတျောကောငျးယောငျ မအောငျလို၊ မကောငျးရငျ မကောငျဘူးပဲ၊ မူးရငျ မူးတယျပဲ။ ပကာသနတှနေဲ့ နုရှပွနသေော အယောငျဆောငျ လောကကွီးကို သောကျမွငျကပျလှပကွေောငျး။
၂၀၁၀ မှာ ဘာဖွဈမလဲ၊ မသိသေး။ ဖွဈခငျြရာဖွဈ မောငျဘခဈြပတေကား။
9 responses to “2009 Review by Myself”
လျှပ်စာအုပ်လား.. ဓာတ်စာအုပ်လို့ခေါ်ကြတယ် အောက်မေ့လို့
Do you think yourself as an idol? Myanmar wiki mhar thinker so tae’ page ka bar lote tar lae’.. swe sone kyan lo lae’ pyaw thay tae.. that post write ya chin akyaug ko pyan shin pya par oo.. ayan ko sait win sarr thwar lo.. ( plz just reply at ur blog!)
ဝီကီသဘောဟာ ဘယ်သူမဆို ဝင်ရေးလို့ရပါတယ်။ ကြိုက်တာ ဝင်ရေးပါ။ ဘောင်မဝင်ရင် အက်ဒမင်တွေက ဖျက်ပါလိမ့်မယ်။
စွယ်စုံကျမ်း အမည်ခံရတာကတော့ သိသလောက် ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးတဲ့ ဝီကီကို ဝီကီပီဒီယားက အသိအမှတ်မပြုလို့ပါပဲ။
ဝီကီရေးသားသူနဲ့ ဝီကီပီဒီယန်တိုင်း သူတို့ဘာလဲဆိုတာ ရေးတင်ထားတာ ဓမ္မတာပါပဲ။
ကြိုက်တဲ့ အက်ဒမင် ဝီကီပီယန်ကို ကလစ်ကြည့်ပါ။ သူတို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ နယ်ပယ်နဲ့ ကိုယ်ရေး အကုန်ရှိကြပါတယ်။ ဘယ်သူမှန်းမသိရင်လည်း ဝီကီမှာ စီမံကူညီစီမံဖို့ ဘယ်သူမှ မဲပေးမည် မဟုတ်ပါ။
MOE နဲ့ ဝီကီအကြောင်းတွေ သိချင်ရင် မြန်မာလို မွှေဖတ်ပါ။ အပြစ်တင်ဖို့နဲ့ ဘေးထိုင်ဘုပြောဖို့ ဆိုရင်တော့ မည်သည့်ဝီကီပီယန်ကမှ ဂရုစိုက်လိမ့်မည် မဟုတ် zwe’ အမည်ခံသူရေ …
thanks for reply ko thinker! famous person tway yae’ biography mhar , political affair tway write thint tae lo ma htin mi par bu.. mi mi htin myin chat that that ko hte’ write tar ko pyaw tar par.. what about that?
ပြောရရင်တော့ MOE (ဇော်ဂျီဖောင့်သုံး)၊ မိုင်ဝီကီ (ယူနီကုဒ်သုံး) နှစ်ခုစလုံးဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လုပ်သွားရင် မြန်မာဗဟုသုတ ရှာမှီးသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး လက်သုံးဆိုဒ် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သိတဲ့ အတိုင်း ကိုယ့်ဘလော့ဂ်မှာသာ ကိုယ်ရေးမယ်၊ ချတ်တင်သာ ပွားကြမယ်၊ လေလုံးသာ ထွားကြမယ်၊ ဒီလိုနေရာကျ ဘယ်သူမှ လာရေးလိုကြတာ မဟုတ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ တချို့လည်း ရက်ဂျစ်စတာ လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘာမှ မရေးပါဘူး၊ တချို့က ရေးတယ်၊ ကောက်ရိုးမီး။
ဒီကြားထဲ ဟိုလိုလုပ်ပါလား ဒီလိုလုပ်ပါလား ဟိန်းဟောက်သူတွေက ပေါ်လာတတ်ပါသေးတယ်။
ဝီကီနှစ်ခုလုံးကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ပုံမှန်ရေးသား တည်းဖြတ်သူတွေဟာ လက်ဆယ်ချောင်းပြည့်ရင် ကံကောင်းပါ။
ဒီတော့ ဖျက်လို ဖျက်ဆီး လျှောက်ပြင်သူတွေ၊ ဝါဒဖြန့်သဘောနဲ့ အချက်အလက် ဝင်ပြင်သူတွေ၊ ဝီကီသဘောနဲ့ မလျှော်ညီတဲ့ ရေးတင်ချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါတွေကို လိုက်ပြီး တော်တည့်ဖြောင့်ပေးဖို့ဆိုတာကတော့ လက်ရှိတက်တက်ကြွကြွလုပ်နေတဲ့ လူတစ်စုနဲ့ စာရင် ဘဲအုပ်က တစ်ရာနှစ်ရာ မဗေဒါက တစ်ပင်တည်းပါပဲ။ ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်ရောပေါ့။
Thank you much bro! revealed !
ပိုက်ဆံ မရတဲ့ အလုပ် လုပ်…။ လူပြော သူပြော ခံရ…။ ဦးသင်ကာကြီး အားနာ မိပါတယ်..။
ကိုယ့်ပညာနဲ့ ကိုယ်ဆို တော်ရုံ လစာလောက်တော့ မှုမှာ မဟုတ်ဘူး.။ ခုတော့…။
လုပ်သာ လုပ်ပါဗျာ..။ အားပေးပါတယ်..။ စေတနာမှန်ရင် အလကား မဖြစ်ပါဘူး…း)